Hisy orana rahampitso: mbola hafana be ny andro | NewsMada
Mbola hitoetra ny hafanana 30°C eto afovoan-tany mandritra ny hateloana, araka ny fanazavan’ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. 18°C ny maripana ambany indrindra ary hahitana zavona ny vao maraina fa hisava ihany ao anatin’ny tontolo andro. Momba ny rotsak’orana kosa, rahampitso vao hiandry orana ny eto Antananarivo fa maina ny andro omaly sy anio. Hahazo orana koa ny ilany andrefan’ny afovoan-tany (i Vakinankaratra, Amoron’i Mania…) ka mety harahina kotroka izany. Orana malefaka no hirotsaka ho an’ny faritra Sava sy ny atsinanana iray manontolo ao anatin’ny telo andro manaraka.
Tsy misy fiforonana andro ratsy ahina amin’ity herinandro ity, efa hiditra amin’ny vanim-potoana manasara-taona amin’izao fotoana izao izay mety hisehoan’ny vanim-potoana rehetra.
Ambany ny tsindrin’ny atmosfera fa amin’ny zoma izao vao hangatsiaka ny andro. Ho an’ny anio, ho an’ny tapany maraina, hiseho ny orana tandrifin-drahona ho an’ny morontsirak’i Sofia sy i Boeny, Antalaha, Analanjirofo. Ho betsaka ny zavona ho an’ny faritra Analamanga, ny faritra Itasy, ny faritra Vakinankaratra, faritanin’i Fianarantsoa, ny faritra Anosy, ny faritra Androy.
Ny hariva, hisy orana tandrifin-drahona harahin-kotroka any Nosy Be Sambirano, any Sofia, amin’ny ilany atsinanan’i Matsiatra Ambony, any Ihorombe, any Atsimo Atsinanana, any Anosy, any Itasy, any Vakinankaratra, any Amoron’i Mania, amin’ny ilany atsinanan’ny Afovoan-tany.